How'd it happen and more reports?: RHC's 24 Weeks Bootcamp Program အကြောင်
RHC's 24 Weeks Bootcamp Program အကြောင်
RHC's 24 Weeks Bootcamp Program အကြောင်း
Q : RHC's 24 Weeks Bootcamp ဟာ Beginner တွေ အတွက်
A : RHC's 24 Weeks Bootcamp ဟာ Computer Networking ကို
အခြေခံမှစပြီး Professional Network Engineer တစ်ယောက် ဖြစ်သည်အထိ
Q : RHC's 24 Weeks Bootcamp မှာ တက်ပြီးပါက မည်သို့သော Certifications တွေကို ဖြေဆိုနိုင်ပါမည်လဲ ?
A : RHC's 24 Weeks Bootcamp Program သည် Certifications ကို
ဦးတည် သင်ကြားသော သင်တန်းမဟုတ်ပါ. Professional တစ်ယောက်
အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်ရန် သင်ကြာပေးသော
သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်. သို့ပေမဲ့ RHC 24 Weeks Bootcamp သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အောက်ပါ Certifications များကို လွယ်ကူစွာ ပြင်ဆင်ဖြေဆိုနိုင်မှာ
1 - CCNA ( Routing & Switching )
2 - CCNP ( Routing & Switching )
3 - CCIE ( Routing & Switching : Written )
4 - CCNA ( Service Provider )
5 - CCNP ( Service Provider )
6 - CCNA ( Security )
7 - CCNA ( Data Center )
8 - CCDA ( Design )
Q : RHC's 24 Weeks Bootcamp သင်တန်းကြေး က ဘယ်လောက်ပါလဲ ?
A : ၁၅ သိန်း ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်. ( ခွဲသွင်းလို့ မရပါ )
Q : သင်တန်းကာလ နဲ့ သင်တန်းအချိန် ?
A : သင်တန်းကာလ ၂၄ ပတ် ဖြစ်ပြီး သင်တန်းအချိန်မှာ Sat & Sun
မနက် ၁၀ နာရီ မှ ညနေ ၆ နာရီ ထိ ဖြစ်ပါတယ်.
Q : RHC's 24 Weeks Bootcamp သင်တန်းပြီးဆုံးပါက မည်သို့သော Companies များတွင် Professional Network Engineer အဖြစ်
A : RHC ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါ
Telenor, Ooredoo, MPT, YTP, Huaweii, ZTE, KDDI, Frontiir, Ministry of Science and Technology, CB Bank, KBZ Bank, Ayeyarwady Bank, United Amara Bank အစရှိသော Companies တွေမှာ Professional Network Engineer အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါတယ်.
#RHC #24Weeks #Bootcamp #Program #Yangon
Posted by Ko Nge at Sunday, December 13, 2015